XOG: Maxaa ka soo baxay baaritaankii Kiiskii ugu weynaa musuqmaasuq ee Dekadda Muqdisho. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Maxaa ka soo baxay baaritaankii Kiiskii ugu weynaa musuqmaasuq ee Dekadda...
XOG: Maxaa ka soo baxay baaritaankii Kiiskii ugu weynaa musuqmaasuq ee Dekadda Muqdisho.
Kiiskii ugu weynaa ee dibadda u soo baxa ayaa dhowaan ka dhacay Dekadda Muqdisho oo ah isha ugu weyn ee dowladda Federaalka ay dhaqaalaha ka hesho.
Kiiskan ayaa waxaa soo shaac bixiyay ciidamada booliska dekadda ee koontaroolka Canshuuraha qaabisan kadib markii Konteenar laga bixinayay dekadda lagu helay in si hoose loo canshuuray oo laga qaaday lacag aad uga yaray intii laga rabay.
Ilo ku sugan dekadda ayaa sheegay in wax is daba marinta canshuuraha dekadda ay ahayd caado muddo dheer soo jirtay laakiin kiiskan uu qarxay markii uu khilaaf soo dhex galay dhinacyada ku shirkoobay dhaqaalaha dekadda.
Kiiskan qarxay ayaa waxaa ku baxay madax uu ka mid ahaa Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre, waxaana markii dambe loo saaray sii-hayaha Hanti dhowrka Guud ee Qaranka Cali Abuukar Axmed oo shalay soo gabagabeeyay baaritaanka kiiskii ka dhacay Dekeda Muqdisho.
Baaritaanka ayaa la sheegay in lagu ogaaday silsilad isku xiran oo Dekadda Muqdisho ka dhex jirta, taasoo lagu musuqmaasuqo shixnadaha kaso dega dekadda oo qaarkood canshuurtii laga rabay si farsameyn loo leexsado.
Natiijada baaritaanka ayaan la fileyn in lasoo bandhigo, iyadoo hore Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre loogu wargeliyay musuq weyn oo ka jira dekadda, taasoo uu ka gaabsaday inuu wax ka qabto.
Axmed Cabdullaahi Samow oo u qaabilsan Wasaaradda Maaliyada qeybta Furdada dekada Muqdisho’ ayaa ka mid ahaay shaqisyaadkii Ololaha doorashada u qaabilsana Madaxweyne Farmaajo waana shaqsiga Musuq maasuqa Ugu weyn ku kacay lamana ogo sida laga yeeli doono waloow in laga gaabsado aay u badan tahay.